IMuroexe, uphawu lwaseSpain olunqobayo ngemiklamo nezinto zalo ezintsha Amadoda aSitayela
IMuroexe, uphawu lwaseSpain olunqobayo ngemiklamo nezinto zalo ezintsha
Amadoda aSitayela | | Calzado
Namuhla sikulethela iHombresconestilo.com uphawu olukhetheke kakhulu futhi olungenye yalezi esizithanda kakhulu ezingeni lokuklama nokuqamba ngezinto zokwakha nezinto ezibalekela okwendabuko. Igama lakhe ngu Muroexe futhi ngaphandle kwalokho ongakucabanga ngombono wokuqala, kuyi- Inkampani yaseSpain okwazile qamba emkhakheni onganyakazi njengezicathulo. Amamodeli ayo asuselwa kumiklamo yama-minimalist, izinto ezintsha, ukukhanya okuncane kakhulu ukufeza umqondo wezicathulo zasemadolobheni ohlangene phakathi kwezicathulo namateki nangokuthinta okucacile. high tech lokho kuhlaba umxhwele umphakathi ngamayunithi angaphezu kwama-250.000 athengisiwe kuze kube manje.
Yize yabo imikhiqizo yezinkanyezi izicathulo namateki, lo mkhiqizo usinikeza neminye imikhiqizo efana namabhuzu, izimbadada nezinye izinsimbi ezifana nojosaka, izikhwama, ... zonke ngesitayela seMuroexe esimakiwe: imiklamo emincane nezinto zokwakha ezintsha.
Ukuze sikusondeze kweminye imikhiqizo kukhathalogi yayo, umkhiqizo usinikeze wona Amamodeli ama-3 amateki nezicathulo esizobona ngezansi.
3 I-Atom Gravity Metric
4 Ubuhle nobubi bemikhiqizo yabo
5 Ezinye izithombe zamamodeli we-Muroexe
El IMarathon Nebula Osaka Ingenye yalezo zinhlobo zeMuroexe eziphakathi nendawo kwezicathulo nezicathulo. Ukubukeka kwawo kubukeka buhle futhi busangulukile, kepha uma ubeke ukukhanya nokuguquguquka kwezinto eyakhiwe ngalo kusenza sizizwe sengathi sigqoke amateki anethezekile. Isicathulo sakhiwe ngendwangu elula yokuphefumula evumela ukuthi uzigqoke ezinsukwini ezishisa kakhulu ngaphandle kwenkinga futhi ngenxa ye-ergonomic memory foam insole yayo ilungisa unyawo lwakho njengegilavu. Ukuphela kwe-EVA (okusetshenziselwa izicathulo zokugijima eziqeqeshiwe) kuyisinqumo esifanele ukufeza umkhiqizo olula kakhulu osebenza kahle.
Kuyisicathulo esifanelekile se- gqoka ngokunethezeka futhi ubekezelele izinsuku zokusebenza kanzima kepha ukugcina i- ukubukeka okuhle.
Intengo yayo yangempela ngu- € 80 kepha manje Ungazithola zithengiswa ngo- € 35 kuphela ngokuchofoza lapha.
IHybrid Asteroid White Kuyimodeli engena ngamehlo, noma uthandana noma ungayithandi kepha kunzima ukuthi ube nombono ophakathi nendawo. Icala lethu ngelokuqala, kubonakala ngathi a imodeli enhle enokwakheka okuyisisekelo futhi okusha ngenxa yobuncane bayo.
Njengoba kungabikho mikhakha ebonakalayo, umkhiqizo wenziwe ngesikhumba sokwenziwa sokwenziwa kwesikhumba futhi, njengoba kujwayelekile emikhiqizweni yeMuroexe, kukhanya kakhulu. Ezingeni le-sole ne-insole, isebenzisa izinto ezifanayo nemodeli yangaphambilini: i-EVA sole ukuhlinzeka ngezemidlalo ngenkathi igcina ubuhle bayo yonke kanye ne-insole ye-ergonomic ekhishwayo. inkumbulo Foam.
Ukuba umkhiqizo omhlophe ngokuphelele, okunye kokwesaba kwethu kokuqala ukuthi kuzokonakalisa kalula futhi kube nzima kakhulu ukuyihlanza. Iqiniso ngukuthi isikhumba sokwenziwa sinjalo kungcolile kangconywana kunokuba bekungabonakala ekuqaleni futhi ihlanzwa kalula ngendwangu emanzi ngensipho encane.
Intengo yayo yangempela yayingu- € 75 kodwa manje ungayithenga ngo- € 50 kuphela ngokuchofoza lapha.
I-Atom Gravity Metric
Isilayidi I-Atom Gravity Metric Kungukuvela kwe-Atom, imodeli ephumelele kunazo zonke yomkhiqizo futhi okwenze yanqoba imakethe eminyakeni embalwa edlule. Yenziwe ngesikhumba sokwenziwa esingenamanzi futhi sinjalo itholakala ngemibala ehlukene emi-5 kukho konke ukunambitheka. Okuwukuphela kwenjoloba, okunikeza ukubambelela okuhle ezimweni zamanzi yize kwenza isisindo sibe ngaphezulu kunezinye izinhlobo esizihlolile kusuka kulo mkhiqizo. Njengazo zonke ezinye izinhlobo, iza ifakwe i-ergonomic memory foam insole elingana negilavu ​​ezinyathelweni zakho.
Imodeli entsha ye-Atom Unayo onawo nge- € 80 ngokuchofoza lapha.
Ubuhle nobubi bemikhiqizo yabo
Njengoba sibona emikhiqizweni esiyibuyekezile, iMuroexe yinkampani ekubheja ngokusobala ku- umklamo omncane kanye nobuchwepheshe be-avant-garde kakhulu emkhakheni wezicathulo. Imikhiqizo yabo ayinangqondo, ihlanzekile, icishe ibe nomthungo futhi inhle kakhulu; Zimelela iphuzu eliphakathi phakathi kokunethezeka kwesicathulo kanye nesitayela sesicathulo, ukuphatha ukuhlinzeka ngezwe elihle kakhulu. Into yokuqala ekushayayo ukuthi zikhanya kangakanani, kakhulu kunezicathulo onazo ekhaya nokuthi i-memory foam insole inethezeke kanjani lapho ilungisa isimo sonyawo lwakho. Futhi zikhululekile ukugqoka, sizibeke usuku lonke ngaphandle kokuhlupheka konyawo.
Njengephuzu kuphela elimelene nalo, indwangu yemodeli yeMarathon Nebula Osaka iguquguquka ngokweqile okwenza imodeli ikhubazeke kalula onyaweni futhi ibukeke ingakhangi ngemuva kwezinsuku ezimbalwa zokusetshenziswa.
El emaphaketheni kungenye yamaphuzu aqinile wemikhiqizo yayo. Ukwamukela nokuvula imodeli ye-Muroexe kuyinto engokoqobo Ngenxa yebhokisi layo eliqaphile, ikhwalithi yezinto ezisemgqeni ezikhumbuza kakhulu imikhiqizo ye-Apple.
Mayelana nentengo, inani lemali lihle, ikakhulukazi uma usebenzisa ngokunenzuzo ukunikezwa kwamamodeli ancishisiwe.
Ezinye izithombe zamamodeli we-Muroexe
Ngezansi sikunikeza uhlu lwezithombe zamamodeli we-Muroexe esiwahlaziye kule ndatshana.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Calzado » IMuroexe, uphawu lwaseSpain olunqobayo ngemiklamo nezinto zalo ezintsha
Izici ezinomthelela kwezempilo